စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအမ်စတာဒမ်သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်သေးပြန်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တူးမြောင်းစူးစမ်းဖို့ပြန်လာနေကြသည်ရှိမရှိ, သင်သည်အမ်စတာဒမ်တွင်ထူးခြားသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သိလိုသည်! အကယ်၍ သင်သည်အမ်စတာဒမ်ရှိ Damrak Avenue ထက်ကျော်လွန်သောစွန့်စားမှုများကိုရှာဖွေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက, ဒီစာရင်း…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောကောင်းစွာဟော်လန်မှာအကောင်းဆုံးပါတီဖြစ်နိုင်သည်. အပေါ် 27 ဧပြီလ, သူတို့ဂီတနှင့်အတူဘုရင်က Willem-Alexander ကရဲ့မွေးနေ့ကျင်းပ, လမ်းပေါ်ပါတီများ, ခွေးလှေးစျေးကွက်, နှင့်ပျော်စရာဝိုင်း. ရှငျဘုရငျကိုကိုယ်တော်တိုင်သူ့မိသားစုနှင့်အတူတိုင်းပြည်ကတဆင့်ခရီး. အရင်ညမှာ…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဒါဟာမတ်လအတွက်ထွက်ပေါက်စီစဉ်ဖို့သိပ်နောက်ကျမယ့်, အီစတာအလုအယက်၏ရှေ့ဆက်. ကလေးတွေအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ယခုချစ်ရသူနှင့်အတူ quaint ကျွန်းငယ်လေးများသို့လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်, ပထမဆုံးမိသားစုခရီးကိုစတင်လိုက်ပါ…